Imbasa ka-Neville Alexander Kwigalelo Lophuhliso Kusetyenziso Lweelwimi ezininzi – SBAfrikaans
Imbasa ka-Neville Alexander Kwigalelo Lophuhliso Kusetyenziso Lweelwimi ezininzi
Kwiveki ephelileyo i-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) iye yafumana Imbasa ka-Neville Alexander Kwigalelo Lophuhliso Kusetyenziso Lweelwimi ezininzi kumsitho weeMbasa zeNkcubeko obanjwa minyaka le liSebe lezeMicimbi yeNkcubeko nezeMidlalo lase Ntshona Koloni.
I-SBA yinkampani engenzi ngeniso ejongene nophuhliso lwesi-Afrikaans. Ijongene nokuxhobisa bonke abo bantetho isisi-Afrikaans. Usihlalo we-SBA, uGqirha Marlene le Roux, uyangqina: “Inkqubo ze-SBA zisekelwe ukunceda ekwakheni isizwe ngolwimi lwesi-Afrikaans kwaye usetyenziso lweelwimi ezininzi ngundoqo ekufezekiseni oku.”
Ezinye izinto ezithathelwe ingqalelo ekunikezeleni ngale mbasa ngamaphulo afana nencwadi esiyiphuhlisileyo elwimi-zininzi esisikhokelo sokufuna umsebenzi kwabo baqalayo ukuphangela, incwadi emabala-bala ebhalwe ngesi-Afrikaans nesiXhosa, kwakunye nokukhutshwa kwezinto zokufunda ezongezelelweyo kwiinzame zokuphuhlisa usetyenziso lweelwmi ezininzi .
Ezinye iinzame ze-SBA zokuzama ukugcina nokubhiyozela imvelaphi yeelwimi zethu ezahlukeneyo ekuhlaleni ziye zanegalelo elingumangaliso. La maphulo e-SBA angamabali ebezama ukubalisa ngobomi obubodwa babantu abadala abahlala kwiingingqi ezikumaphandle aseNtshona Koloni ukusukela ngo-2016, aye abhalwa ngolwimi lwezandla kwakunye nezihlokwana zesiNgesi. Kwakho, umyadala weekwayala, Afrikaans Sing!, othi ubanjelwe e-Artscape Theatre lelinye lamaphulo elivunyiweyo kuphuhliso lweelwimi ezininzi nakwiilwimi ezahlukileyo zaseNtshona Koloni, kwaye oku kudlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yokwakha isizwe.
I-SBA ikholelwa kwinto yokuba ezi nkqubo zayo zidlala indima efanelekileyo kubuncwane bokungafani nakwimbonakalo ye-Afrikaans, yaye oku kunegalelo kuphuhliso lwe-Afrikaans njengolwimi.
UGqirha Niel le Roux, usomaqhuzu wase-SBA, ngethuba esamkela le mbasa kunye neegcuntswana loogxa bakhe, uthe: “Yinto entle kakhulu into yokuba i-SBA ifumane le mbasa ngethuba loNyaka weeLwimi zesiNtu kwiLizwe jikelele. I-SBA iyazingca ngokubhala nokushicelela ngesi-Afrikaans nesiXhosa kwakunye nokusingatha imisitho apho siye sonwabele yaye sihloniphe ezi lwimi zaseNtshona Koloni.”
Le mbasa iyilwe ngu-Heat Nash waseKapa kwaye isekelezwe kumfanekiso owenzwe elityeni malunga neminyaka engama-73 000 eyadlulayo, kwaye lo mfanekiso ufunyenwe ngo 2018 kumqolomba wase-Blombos kufutshane ne-Stilbaai.
Inkcukacha: Inkqubo ye-18 yeMbasa zeMicimbi yeNkcubeko. Intshona Koloni: Intsusa yoPhuhliso lweNkcubeko